S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ - Most Recent
S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] Abu Dhabi မြို...
Tags: Abu Dhabi မြို့ ၌ကျင်းပခဲ့သောဓမ္မပူဇာပွဲမှ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတောမူသောတရားတာ် ဓမ္မပူဇာ ashin saykeinda saykinda dhammaduta dhammapuzar S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မြင်ပေမဲ့...
အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ) - မြင်ပေမဲ့ မမှန် တရားတော်
Tags: dfdsfd S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] တွေ့ပါတယ်...
အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ) - တွေ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မမြင် တရားတော်
Tags: dfdsf S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မတူညီသော...
အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ) - မတူညီသော မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း တရားတော်
Tags: 7-18 S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဆရာတော်ကြ...
Tags: အရှင်ဆေကိန္ဒ ( ဓမ္မဒူတ ) , သြ၀ါဒများ , Dhammaduta Ashin Saykinda , Ashin Saykeinda , AshinSayKeinda , AshinSaykinda , Saykinda , saykeinda S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အရှုံးမခံ၊...
အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ) - အရှုံးမခံ၊အမြတ်ကျန်အောင် တရားတော်
Tags: အရှင်ဆေကိန္ဒ(ဓမ္မဒူတ) S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သူတို့ကြေ...
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) - (၂၀၀၉)၀ါတွင်းဒုတိယအကြိမ်တရားစခန်း၌ဟောကြားတော်မူသော... သူတို့ကြောင့် တရားတော် (၉)- USKD - TDK - 9
Tags: အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သူတို့ကြေ...
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) - (၂၀၀၉)၀ါတွင်းဒုတိယအကြိမ်တရားစခန်း၌ဟောကြားတော်မူသော... သူတို့ကြောင့် တရားတော် (၈)- USKD - TDK - 8
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) - (၂၀၀၉)၀ါတွင်းဒုတိယအကြိမ်တရားစခန်း၌ဟောကြားတော်မူသော... သူတို့ကြောင့် တရားတော် (၇)- USKD - TDK - 7
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) - (၂၀၀၉)၀ါတွင်းဒုတိယအကြိမ်တရားစခန်း၌ဟောကြားတော်မူသော... သူတို့ကြောင့် တရားတော် (၆)- USKD - TDK - 6
Tags: အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ) Pages: 123456of 6